कोईरालाको जिवनमा आधारित वृतचित्र हेटौंडामा हुदै । - हेटौंडा टुडे
कोईरालाको जिवनमा आधारित वृतचित्र हेटौंडामा हुदै ।
२६ मंसिर २०७६, बिहीबार २२:१३
मंसिर २६, हेटौँडा
जी.पी. कोईराला फाउण्डेसनको आयोजनामा हेटौँडामा स्व. गिरिजा प्रसाद काईरालाको जीवन घटनाको कालखण्डमा आधारित वृत्तचित्र प्रस्तुत हुने भएको छ । यहि मंसिर २८ गते शनिबार नेपालका पुर्व प्रधानमन्त्री एव प्रजातान्त्रिक योद्धा स्वा. गिरिजा प्रसाद कोइरालाको जीवन घटनामा आधारित प्रजातन्त्रका लागी अपहरण नामक बृत्तचित्र हेटौडामा प्रर्दशन हुने आज बिहिबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी जानकारी गराएको हो ।
जी. पी फाउन्डेसनका केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइरालाको उपस्थितिमा यहि मंसिर २८ गते फाउन्डेसनको मकवानपुर कार्यालय समेत उद्घाटन गर्ने र हेटौडाको ओम्याक्स चलचित्रमा बृत्तचित्र प्रर्दशन गरिने फाउन्डेसन मकवानपुरका संयोजक नारायण प्रसाद लम्सालले जानकारी दिएका छन्।
वृतचित्रका लागि आयोजकले ३ सय, ५ सय र १ हजारका दरले जम्मा ३ सय ५० वटा टिकट रहेको जनाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली काँग्रेस मकवानपुरका कार्यबाहक सभापति बिष्णु लामिछाने, फाउन्डेसनका मकवानपुर सचिव रामहरि तिमल्सिना सहित फाउन्डेसनका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो।